सौन्दर्य - के त्यो धारक को आँखा मा छ? हेर्ने समय
शेरचनले स्क्रबमा झन्डा लगाइदिन्छ र जेसियस पछि देख्छ, जसले घाँसको छेउमा असाध्यै पलाउँछ। प्राइभेटर झन्डै झन्डै झन्डै झण्डा र शिकार सुरु हुन्छ। तपाईं उनको पेशी खुट्टा पूर्ण बल संग जमीन को धक्का देख सकते हो। हामी सौन्दर्यको बारेमा कुरा गर्छौं।
सिंहदरवार सुन्दर, सुन्दर पशु हो। तर सौन्दर्य पनि रंगीन फूल हो, यसैले अस्तित्वमा कमजोर र छोटो रहन्छ।
सूर्योदयमा प्रेम मा युगल - सुन्दर, सही?
यद्यपि, हामी उनको सुगंध र उनको रंगीन फूलको आनन्द उठाउँछौं। दुवै चीजहरू सामान्यसँग कम छन्, र अझै हामी शब्द "सुन्दरता" दुवैसँग जोड्दछौं।
त्यो किन हो? हामी किन खतरनाक र शानदार दुर्व्यवहार र भिजेको र सानो फूल सुन्दर छौं?
सौन्दर्य सारै छ
सौन्दर्य एक संक्षेप अवधारणा हो र ब्रोकरको नजरमा छ। यसैले, हामी धेरै सुन्दर प्राणीलाई सुन्दर रूपमा महसुस गर्छौं। सुन्दरता एक भावना हो जुन हेर्न र आँखाको भावद्वारा उत्पन्न हुन्छ।
सिद्धान्त, दर्शकको नजरमा सुन्दरता, तर अर्को राउन्ड गणना गर्दछ। यस अर्थमा, प्रत्येक व्यक्तिले उहाँमा धेरै व्यक्तिगत सुन्दरता छ। एक भित्री सुन्दरता पनि बोल्छ।
यो एक मुस्कुराउन, एक चतुर लागी वा एक निश्चित इशारा हुन सक्छ। वा यी सबै कुरा एकैचोटि। प्रत्येक व्यक्ति सुन्दर छ। र हरेक व्यक्तिले आफ्नो सुन्दरतालाई पहिचान गर्न चाहन्छ।
कुनै सुन्दरता बिना प्रशंसा
व्यक्तिगत र धेरै घनिष्ठ सुन्दरता उत्पादन गर्न, हरेक महिला र हरेक मानिसलाई पहिला आफूलाई आफैलाई चिन्न र सराहना गर्नुपर्छ। यदि एक व्यक्ति आफैलाई सुन्दर हुन देखाउँछ भने, यसले अरू मानिसहरूलाई धेरै भावनाहरू ट्रिगर गर्छ।
व्यक्ति आकर्षक, सुन्दर र सुरुचिपूर्ण देखिन्छ। यो यो विशेष करिश्मा हो जसले साधारण व्यक्तिलाई सुन्दर व्यक्तिमा बदल्छ। हामी एक मानव को आकर्षण संग प्यार मा गिर।
हामी सँगसँगै सँगसँगै एक सहानुभूति करिश्मा छौँ। हामी सडकमा अजनबीमा मुस्कान गर्छौं किनभने उहाँले हामीलाई न्यानो लगाउनुहुन्छ।
सुन्दरता सबैमा छ
प्रत्येक व्यक्ति सुन्दर छ। हरेक प्राणी सुन्दर छ। आफ्नै तरिकामा, हरेक तस्विर र हरेक अवस्थामा यसको व्यक्तिगत र धेरै व्यक्तिगत सुन्दरता छ।
पहिचान, अभिव्यक्ति र यो पनि जीवित एक कला हो। आकृति र जुनूनले मात्र सिक्न सक्ने एक कला।
सुन्दर हुनु भनेको मायालु प्रेम हो। र आफैलाई र तपाईंको सँगी मानव जातिलाई करिश्मा र सुन्दर करिश्मा प्रदान गर्दछ।
व्यायाम पत्रक सेक्सशास्त्र - मानव अभिन्नता